पूर्व उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अवस्था गम्भीर « Arthabazar.com
प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार २०:५९
मष्तिस्कघात भएका कांग्रेसका युवा नेता नवीन्द्रराज जोशीको अवस्था गम्भीर रहेको छ । गम्भीर अवस्थामा उहाँको काठमाण्डौको थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ ।
अस्पतालले आज दिउँसो ३ बजे एक पत्रकार सम्मेलन गरी नेता जोशीको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयमा जानकारी गराएको छ । न्यूरो सर्जन डा. राजीव झाले परिवारलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार हिजो राति साढे १२ बजे देब्रे हात बाउडिएसँगै कमजोर महसुस गरेका जोशीलाई परिवारजनले राति नै वीर अस्पताल लगेका थिए । अस्पताल आउँदासम्म बोलिरहेका नेता जोशी वीर अस्पताल पुग्दासम्म बहोस् भइसक्नुभएको थियो । बेहोस भएपछि वीरमै सीटी स्क्यान गरिएको थियो र सो क्रममा टाउकोमा नराम्रोसँग रगत जमेको देखिएको थियो ।
अवस्था निकै गम्भीर देखिएपछि वीरकै डाक्टरहरुको सल्लाहमा नर्भिक अस्पतालमा ल्याइएको डा. झाले बताए । बिहान साढे ३ बजे आफूले सो विषयमा खबर पाएको र आफू आइपुग्दा नेता जोशीको अवस्था निकै गम्भीर रहेको र उहाँ कोमामा पुगेको न्यूरो सर्जन डा. झाले बताए । सो क्रममा नेता जोशीलाई पटक–पटक बान्ता भएको र बान्ता फोक्सोमा पुगेको देखिएको थियो । फोक्सोमा बान्ता पुग्दा श्वास फेर्न गाह्रो भएको र इमेरजेन्सी इन्कुभेसन(पाइप राखेर श्वास फेराउने काम) गरिएको डा. झाले जानकारी दिए ।
नर्भिकमा ल्याइसकेपछि जोशीको आँखाको नानी एकातिर फुलेको देखिएको समेत डा. झाले बताउनुभयो, उहाँका अनुसार यो राम्रो संकेत होइन । ‘एकातिर त्यस्तो देखिनु भनेको आधा दिमागले काम नगरेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ।’ डा. झाले भन–‘नर्भिकमा ल्याएर हामीले पुनः सीटी स्क्यान गर्दा टाउकोको बीच भागमा पानी जम्दै गरेको समेत देखियो । उहाँमा सुगर, प्रेसरको समस्या पनि रहेछ । उहाँले रगत पातलो हुने औषधि पनि खाइरहका रहेछन । यस्तो व्यक्तिलाई सर्जरी गरिए रक्तश्राव नियन्त्रण हुँदैन । त्यसकारण विशेष रगतहरु व्यवस्था गरेर हामीले सानो ड्रिल गरी ड्रेन राखिदिएका छौं, त्यसबाट १३० एमएल पानी निकालिसकेका छौं ।’
नेता जोशी हाल भेन्टिलेटरमा रहेका छन । उनको अवस्थालाई चिकित्सकहरुले एकदमै गम्भीर र जटिल भनेका छन् । ‘विश्वमा हेर्ने हो भने यस्तो स्टेजमा पुगेका १०० बिरामीमा ७० प्रतिशतसम्मको डेथ नै हुन्छ । बाँचेका ३० प्रतिशतमा पनि ठूलो किसिमको प्यारालाइसिसहरु देखिने संभावना हुन्छ ।’ डा. झाले भन्नुभयो–‘हामीले उनको प्रत्येक घण्टाको अवस्था हेरेर उपचारको रणनीति बनाइरहेका छौं ।’